Ruushka oo bilaabay in uu duqeeyo waddooyinkii ay reergalbeedku hubka umarsiinayeen dowladda Yukreyn.
Tuesday April 26, 2022 - 13:22:58
Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa hub casri ay udaabulay dalka Yukreyn.
Dowladda Ruushka ayaa bilaawday in ay beegsato marinnada dhulka ee dalka Yukreyn ku xira qaaradda Yurub inteeda kale.
Mas'uuliyiin American ah ayaa usheegay warbaahinta in markii ugu horraysay diyaaradaha Ruushka ay duqeymo ku bilaabeen waddooyinka waaweyn ee Yukreyn ku xira dalal uu kamid yahay Poland.
Dhowr qarax ayaa laga maqlay khadka tareennada ee ka baxa magaalada Kiyeef ee aada dhanka Poland, sawaariikda Kuruuzka loo yaqaan iyo diyaarado casri ah ayuu Ruushku u adeegsaday duqeymahan.
Saraakiil uhadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegaya in Moscow ay qaadday tallaabadii ugu horraysay oo ay ku beegsanayso shixnadaha hubka reergalbeed ee Yukreyn kusii qulqulaya.
Wargeyska The Politico ayaa kasoo xigtay mas'uuliyiin American ah in Ruuskhu uu beegsi ku haya waddooyin mara galbeedka iyo bartamaha dalka Yukreyn islamarkaana uu isku dayayo is hortaagga qulqulka hubka reergalbeedka.
Pentagon-ka Mareykanku wuxuu ku faanay in hub culus oo ay kamid yihiin gaadiid gaashaaman, sawaariikh iyo madaafiicda lidka taangiyada ay si dhaqsi ah ugu daabuleen gobolka Donbaas isbuucyadii lasoo dhaafay.
Joe Biden ayaa war uu soo saaray ku sheegay in qarash dhan hal bilyan oo dollar ay ku bixiyeen daabulidda hubka Yukreyn.
Putin ayaa goor sii horraysay kadigay in dagaalka Yukreyn uu isku bedelo dagaalkii 3aad ee adduunka wuxuuna quwadaha reergalbeedka ku eedeeyay in ay hub halis gelinaya amniga Ruushka ku daadbulayaan Kiyeef.